Somaliland: “Wixii Hore Wax Ka Liita Inaad Doorato Lama Ogola..” Sheekh Aadan-Siiro - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Wixii Hore Wax Ka Liita Inaad Doorato Lama Ogola..” Sheekh Aadan-Siiro
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa ka hadlay Doorashada Madaxtooyada ee dhawaan ka dhici doonta Somaliland iyo Dadkii badnaa ee ku dhintay Qaraxii Toddobaadkii hore ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya.
Sheekh Aadan-Siiro ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Maanta si gaar ah ugaga hadlay Ahmiyadda ay Dadka Muslimiinta ah u leedahay inay dhexdooda isku Naxariistaan, isagoo isagoo Tusaale u soo qaatay Muwaadin ka mid ahaa Dadkii Doorka wanaagsan ka soo qaatay Horumarka Somaliland oo xilligan u baahan taageero.
Sheekha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Khudbaddan waxaan ka sameeyay Nin ka mid ahaa Dadkii Xilliyadii Adkaa ee Dalkani soo maray aad loo tilmaami jiray oo Socodku ku adag yahay, wuxuu igala hadlay inaan Masaajidka Dadka ugala hadlo oo aan u sheego duruufta uu ku nool yahay, iyadoo kuwii uu ka mudnaa ay Maanta yihiin Dabaqaadka sare.”
Sheekhu wuxuu ka warramay Ahmiyadda Naxariista Addoomaha ILAAHAY dhexdooda “Sida laga weriyey Rasuulku wuxuu yidhi, ma rumaynaysaan illaa aad Naxariisataan ama isku Naxariistaan, markaas ayaa Saxaabadu Rasuulka (CSW) ku yidhaahdeen dhammantayo Naxariisbaa nagu jirta, laakiin Rasuulku wuxuu yidhi ‘ugama jeedo Naxariista aad u naxariisanayso Qofka aad garanayso iyo inta kugu xeeran, Raxmadda la idinka doonayaa waa Raxmad Dadka wada gaadhaysa.”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu Tacsi u diray Dadkii ku Geeriyooday Qaraxii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho “Waxaanu aad iyo aad u Tacsiyadaynaynaa Dadkii Muslimiinta ahaa ee Magaalada Muqdisho lagu laayey, waxaanu leenahay ILAAHAY Dambigooda ha dhaafo. Dadka laayey Dadkaa Maatida ah ee Muslimiinta ah. Deraasad ay sameeyeen Mujrimiintu waxay ku ogaadeen in 2040-ka ama 2050-ka hadday Muslimiintu Nabad ahaadaan inay Dadka Dunida ka noqonayaan 80%, markaas waxay yidhaahdeen maxaynu kaga hor-tagi karnaa, waxa la yidhi waa In Muslimiinta la gaagaabiyo, sida loo gaagaabinayo waa in Dagaallo Gudahooda laga sameeyo.
Hay’ado Caalami ah ayaa intaas oo Muslimiin ah Dawooyinkii ay ku laayeen la hayaa oo Waddamo badan iyagoo Qoran lagu hayaa. Deraasado la sameeyay (Waxay sheegayaan) in Dadka Muslimiinta ah ee la laayey ay Daraf ka yihiin Dawlado waaweyn oo sheegta inay ka mid yihiin kuwa ugu Qanisan Dawladaha Muslimiinta, iyagoo Masaaliix ay leeyihiin Darteed u isticmaalaya Dad aan Fahamsanayn waxa la kala Macaashayo, markaa waxaynu ILAAHAY u baryaynaa in Dadkaa ku nool Soomaaliya uu faraj u furo.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud waxa kale oo uu Khudbadda Jimcaha kaga hadlay Doorashada Madaxtooyada ee dhawaan ka dhacaysa Somaliland “Idinka (Shacabka Somaliland) waxaan leeyahay Doorasho ayaynu galaynaa, Doorashadu maaha tii aynu doonaynay. Islaamku wuxuu yaqaanaa Afar Doorasho, ta koowaad waxa weeyaan in Marka aad wax dooranayso aad doorataa wixii hore wax ka wanaagsan, waa inaad doorataa wixii hore wax inyar ka wanaagsan, waa inaad doorataa wixii wax la mid ah, inaad wixii wax ka liita doorato waa MAYA, Islaamku afartaa Doorasho ayuu yaqaanaa, mid Shanaad ma jirto.” Ayuu yidhi, isagoo ku taliyey inaan Xisbiyadu ogolaan in Hablaha iyo Hooyooyinku u ololeeyaan, maaddaama oo Diinta Islaamku inna amartay in Dumarku Guryaha ku ekaadaan.
Syria: Qaraxyo waaweyn oo ka dhacay Dimishiq iyo Homs